मुस्लिम मुख्यमन्त्रीले गरे ब्राह्मणलाई साइत हेराएर गृहप्रवेश ! - SAMACHAR SANJAL
मुस्लिम मुख्यमन्त्रीले गरे ब्राह्मणलाई साइत हेराएर गृहप्रवेश !
जनकपुर । ‘उपकारी गुणी व्यक्ति, निहुरिन्छ निरन्तर’ भनेजस्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबै धर्मावलम्बी र भाषाभाषीहरुको मन जित्ने व्यवहार देखाएका छन् । आफू मुस्लिम समुदायको भए पनि मुख्यमन्त्री राउतले विहीबार हिन्दू धर्मअनुसार साइत जुराएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गर्दै पदभार ग्रहण गरेका छन् । यसक्रममा उनले हिन्दु ब्राह्मणबाट साईत जुराएर मन्त्रोच्चारणका साथ पूजाअर्चनासमेत गरे ।
भारत लगायत विश्वका विभिन्न ठाउँमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायवीच विवाद हुने गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको सपथ भोजपुरी भाषामा लिएका राउतले हिन्दु र मुस्लिम समुदायवीचको सहवरण र सदभाव प्रस्तुत गरेकोमा प्रदेश २ का धर्मावलम्बीहरु निकै खुशी देखिए । मैथली ब्राहमणद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पूजाअर्चना गर्नुका साथै मन्त्रोच्चारण गरेर राउत विहीबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रवेश गरे ।
सपथ ग्रहण पश्चात पदभार ग्रहण एवं गृहप्रवेशको साइत अपरान्ह ४ देखि ४ बजेर ४५ मिनेटको बीचमा जुरेको थियो । सोही समयमा उनी कार्यालयमा प्रवेश गरे । पदभार ग्रहण कार्यक्रममा मैथली ब्राहमणले उच्चारण गरेको मन्त्र मुख्यमन्त्री राउतले अक्षरशः दोहोर्‍याएको सुनेर आगन्तुक एवं सहभागीहरु मुखामुख गरिरहेका देखिन्थे । सपथ ग्रहण पश्चात मुख्यमन्त्री जानकी मन्दिर पछाडि रहेको मस्जिदमा जानेछन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, उनले सबैको अनुमानविपरीत हिन्दूधर्म अनुसार पूजापाठ गरे ।
उपसभामुखमा उपमाकुमारी निर्विरोध
यसैवीच प्रदेश २ को उपसभामुखमा संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद उपमाकुमारी देव निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । उपसभामुखका लागि संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको सूचनाको समयावधिभित्र देवको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रदेश संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
फोरमका सांसद ज्ञानेन्द्र यादवको प्रस्तावमा देवलाई राजपाकी सुरिता साहले समर्थन गरेकी थिइन् । आगामी शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख निर्वाचित भएको घोषणा हुने सांसद सचिवालयको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश २ मा राजपाले सभामुख र फोरमले उपसभामुख पद बाँडफाँट गरेका छन् । Source: onlinekhabar.com